Bahda Allsanaag oo hambalyo u diraya Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil “Cawl” iyo Faaiza Cabdirsaaq Nuur ‘Cirfe” . | allsanaag
Bahda Allsanaag oo hambalyo u diraya Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil “Cawl” iyo Faaiza Cabdirsaaq Nuur ‘Cirfe” .
Magaalada Gaalkacayo gaar ahaan Hotel Al-jaziira waxaa ka qabsoontay xaflad qado sharaf ah oo si weyn loo agaasimay , xafladaas oo salka ku haysay Meherka lamaanaha is calmaday oo kala ah Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil “Cawl” iyo Faaiza Cabdirsaaq Nuur ‘Cirfe” .
Labada qoys ee ay kasoo jeedaan Mudanaha iyo Marwadiisa ayaa si waafaqsan diinteena islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida isula ogolaaday in la isugu meheriyo lamaanaha is calmaday ee Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil “Cawl”, waxaana halkaasi si rasmi ah Faaiza Cabdirsaaq Nuur ‘Cirfe” loogu mehriyay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil “Cawl” .
Munaasabadda meherka waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan golayaasha Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda Puntland oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi, Wasiiro, Xildibaano, Maamulka Gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacayo, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Dawladda Puntland.
Waxaa sidoo kale munaasabadda farxadda ah ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan Dawladda Federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayey Guddoomiye Ku Xigeenka Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad iyo xubno kale oo muhiim ah
← Al Shabaab militants bomb Somali beach restaurant, gunfight ongoing Mooryaan xil loo dhiibay oo ka xaday umadda Soomaaliyeed Nus milyan doolarka Maraykanka →